Antonio Rudiger Oo Ka Hadlay Suurta galnimada In Hazard Dhaliyo 40 Gool Xili Ciyaareedkan - Gool24.Net
Antonio Rudiger Oo Ka Hadlay Suurta galnimada In Hazard Dhaliyo 40 Gool Xili Ciyaareedkan
December 18, 2018 Mahamoud Batalaale
Maurizio Sarri ayaa goaan saday in uu Eden Hazard ka ciyaarsiiyo lambar sagaalka beenta ah isaga oo ka door biday weeraryahanada kooxda Kuwaasoo xili ciyaareedkan u muuqda kuwan aan laysku halayn Karin iyaga oo ku guuldaraystay inay dhaliyaan goolal badan oo ay kooxdu baahi u qabtay.
Inkasta oo uu laba kulan oo uu hogaaminayey Weerarka kooxda Hazard, gaadheen guulo muhiim ah oo ay ka mid ahayd guuldaradii ugu horaysay oo ay Man City la kulantay Horyaalka iyo kulankii ay Axadii ku garaaceen brighton, hadana waxa jira qaar ka mid ah oo qaba in Eden lagu celiyo booskiisi saxda ahaa ee Garabka Bidix.
Hazard ayaa ugu danbayn la arkayey isaga oo aan kubada haysan wax badan labadii kulan ee ugu danbeeyay wuxuuna toos uga muuqday lambarka sagaalaad ee kooxda, inkasta oo aanay taasi hoos u dhigin saamayntiisi kooxda, waxa uu caawiye ka ahaa labadii goo lee ay Man City ku garaaceen sidoo kale waxa uu gool dhalin iyo gool caawin isku darsaday kulankii Brighton.
Rudiger ayaana sheegay “Isaga oo hogaamiye, waxa uu bixinaya tusaale wanaagsan, maaha in uu hadal ku yahay laakiin waa mid muuqnaysa, Isaga waa la laadaa waxbadan, sababtoo ah waa mid wanaagsan isagu” “aniga oo ixtiraamaya kuwa kale, Waxaan filayaa in Premier League aysan ahayn kuwo doqoma ah, sidaa darteed in la gaadho 40gool? Laga yaaba in uu samayn karo taas.” Waxa uu kudaray hadalkiisa “ Isagu ma aha mid anaani ah, Hadii uu arko ciyaartoyda kale oo taagan boos fiican waa uu la ciyaara iyaga (ubaasa)”.
Hazard ayaa dhaliyey 22 gool xili ciyaareedkiisi ugu fiicnaa ee gooldhalintiisa kaasi oo ahaa Sanadkiisii ugu danbeeyay ee Kooxdiisii Lille. Intii uu Chelsea ku sugnaa goolasha ugu badan ee uu Hal Xili ciyaareed dhaliyey ayaa ahaa 19 gool tartamada oo dhan, waana sanadkii ay Chelsea qaaday Horyaalka Ingiriiska iyo Koobka Carling Cupka.